Madaxa Doorashooyinka Ee Dalka Kenya Oo Shaki Ka Muujiyay Inay Dhacdo Doorasho Xor Ah Oo Ay Cadaaladi Ku Jirto. – HormoodNews
10/19/2017 8:26 am by HormoodNews Views: 11
Kenya(HMN) Madaxa doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa walaac aad weyn ka muujiyay in ururkooda ay awood u yeelan karaan in ay qabtaan doorasho xor iyo cadaalad ah oo ay soo saaraan natiijo la aqbali karo wiiga fooda inagu soohaya.
Komishanka madaxa banaan ee doorashooyinka oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano (IEBC) ayaa ku soo casuumay hogaamiyayaasha siyaasada ee dalkaasi inay kulmaan inta ka horaysa doorashada oo la filayo inay dhacdo wiiga soo socda. Madaxweynaha dalkaasu mudane Uhuru Kenyata isagu waxa uu doonayaa ina doorashadu dhacdo halka hogaamiyaha mucaaridka ee dalkaasi Raila Odinga isagu uu ku dhaartay inuu dhigo doono mudaaharaadooyin waaweyn oo uu kaga soo hor jeedo doorashadaasi sababtoo ah waxa ay doonayaan in la badelo saraakiisha ugu waawey qaar ka mid ah oo ah kuwa soo saara natiijada ugu danbaysa doorashada.
” Dibadbaxyadu waa ay sii socon doonaan bishan 26keeda waxana ay noqondoontaa dibad baxii ugu weynaa ee abid dalkoo dhan ka dhaca.” ayuu yidhi Raila Odinga mar uu kula hadlaayeey taageerashiisa xaafad ka mid ah Nayroobi.
Dalka Kenya ayaa la filayaa inay marlabaad ka dhacdo doorashadii madaxweynanimada wiiga soo socda,kadib markii ay maxkamada ugu saraysa ay baabiisay ama laashay natiijadii doorashadii dhacday sidedeedii bishii sideedaad ee sanadkan 08/08/2017kii.